Maxaa kasoo baxay kulankii madasha xisbiyada qaran iyo gudoonka baarlamanka - Tilmaan Media
kulan saacado badan qaatay aay dhexmaray gudoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamanka Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo madaxwayne yaashii hore ee Soomaaliya Shariif Shekh Axmex iyo Xassan Sheekh Maxamuud oo ka socda madasha xisbiyada qaran.
kulanka oo lagu laffa guray sida ay doorasho dalka ugu dhici karto xilliga loo asteeyay, ayay labada madaxwayne waxay gudoomiyeyaasha labada aqal ugudbiyeen aragtida madasha ee ah in doorasho la isla ogolyahay dalka kadhacdo, xilligeeda ku dhacdo saamilayda siyaasaddana laga qaybgaliyo talada.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murasal sheekh ayaa uballan qaaday in uu fariitooda ugudbin doono madaxwaynaha iy rayasal wasaaraha.
Wararku waxay intaas ku darayaan in madaxwayne farmaajo iy raysal wasaare khayre mid walba gaar usoo wacay gudoomiyaha golaha shacabka kana codsaday in uu teleefanku ugu dhiibo labada madaxwayne ee hore, halkaas salaan iyo sheeko gaaban ku dhex martay.
Sikastay ahaataba waxaa laga dhursugayaa miraha kasoo baxa kulankaas iyo haddii loo baddali karo kulan ka ballaaran oo dhinacyada siyaasadda soomaaliya kulugleh isaga imaan karaan arrimaha siyaasadda dalka.